Is Social Media Kumanikidza Vashambadzi Kure Kure kweMass Media? | Martech Zone
Is Social Media Kumanikidza Vashambadzi Kure Kure kweMass Media?
China, Kukadzi 16, 2017 Douglas Karr
Uku kwakanaka kunotaurira infographic kubva kuSoutout Social iyo ine mhedzisiro yakadzika kupfuura vatengesi vangave vachida kugamuchira. Iyo infographic inonzi 6 Yemagariro Midhiya Maitiro Anotora Kupfuura 2017 uye inofamba nenzira yega yega yemagariro enhau, mashandiro evatengi ari kuchinja, nekusimudzira matekinoroji sehungwaru hwekunyepedzera.
Yakasanganiswa ne-inoda-vhidhiyo, kushambadzira tekinoroji kuvharidzira, uye kukura kwe1: 1 chiteshi senge Snapchat uye vashambadziri vanofanirwa kutarisisa batch yavo uye nekufashukira kushambadzira kuri kuita kuita gore rega rega. Mutengi ane simba izvozvi rekutsvaga zvavanoda, pavanenge vachizvida, pavanenge vachizvida, nemutengo wavanoda kwairi. Sarudzo dzakadzikira dzekambani dzinonongedzera mukudyara ruzivo rwevatengi uye kuvaka hukama zvakananga.
Kunyangwe mune bhizinesi-kune-bhizinesi hukama, account-based kushambadzira iri kutyaira mhedzisiro. Nepo kushambadzira kukuru hakuna kufa, kwakanangwa, akasarudzika marongero ari kutanga kutyaira rwendo rwevatengi - kwete kushambadzira kwakasimwa kwese kwavasiri kutarisa.
Yemagariro Midhiya Maitiro 2017
AI malenzi e Facebook ne Instagram - Zvimwe zvakaita se kufungidzira zviitiko zvinoonekwa inogona kunge iri pfupi pfupi kuFacebook, asi ini handina chokwadi chekuti imbwa dzeAI dzichasunungurwa panguva ino murwendo rwedu rwekudyidzana. Ini ndinofungidzira kushandiswa kwekutanga kuchave kuenzanisa kushambadza kune zvido zvekuona.
Zvakawanda Vatengi Sevhisi Chatbots - nepo kudikanwa kwehukama uye 1: 1 hukama huri kuzokura, nekutenda kune matekinoroji ayo anobatsira kudzikisa zviwanikwa zvakakosha kuti uwane mhedzisiro yepamusoro. Chatbots inogona kushandiswa kupa ruzivo rwakadzama munzira yekutaurirana isingadzime vatengi kana mabhizinesi - ese achiwedzera mitengo yekutendeuka nekubatsira vashanyi.
Zviripo Zvinobhadharwa Zvinoramba zvichitonga - Kana paine chinhu chimwe vatengesi chavanonzwisisa ndechekuti vezvenhau vanovaka bhiriji pakati pezvigadzirwa nemasevhisi uye vatengi kana mabhizinesi aunoda kuvawana pamberi pavo. Sezvo mapuratifomu enhau enhau ari kukura zvakanyanya, iwe unoziva kuti zambuko riri kuzodhura!
Kukosha pane Bhizinesi Zvimiro & Analytics - Handina chokwadi nazvo zvinhu ndezvechokwadi - ndinotenda mabhenefiti, kukosha, uye ruzivo ndiko uko vezvenhau vari kuenda kunotyaira kubatikana, kutora, kuchengetedza, uye kuwedzera kukosha kwehukama hwedu nevatengi vedu. Analytics yakakosha pane izvi - asi ini ndinosarudza chiitiko chakareruka icho chinobata pane kuwedzera kuwanda kwezvinhu izvo zvisina musoro.
Enda Kure kubva kuAutomation - Ndiri munhu anokakavara pane izvi futi. Mu2017, vashambadziri vachazoda iwo ega otomatiki avanogona kubata kuti vawane migumisiro yepamusoro nezvishoma zviwanikwa. Nekudaro, ini ndichaita nharo kuti inofanirwa kuve maturusi akaomesesa anoteerera, chikamu, kuita hunhu, uye kufanotaura zvinotevera kubatanidzwa online kuburikidza nesocial media.
Yemagariro Shopping & Instant Kutenga - Pamwe pamwe nekwanisi kutenga zviri nyore, kupa, kana kutumira zvipo, kuburitsa zvemukati-zvinogadzirwa nevashandisi ichave iri kukura tsika. Tichagovana posvo nezve Stackla munguva pfupi izvo zvinoshamisa, kuwedzera huwandu hweshanduko dzimwe nguva 30% yezvimwe zvigadzirwa.
Pane kusahadzika kushoma kwekukura uye kusanzwisisika venhau venhau vanozove muna 2017. Kunyange mabhizinesi achiramba achinetseka - chete 34% emabhizimusi madiki anoshandisa midhiya yekudyidzana kuita nekukurukura nevatengi, chinenge chikamu chimwe muzvitatu chevatengi vese vakati chiratidzo chemagariro chiripo Chikonzero chikuru chekuedza zvigadzirwa zvitsva kana masevhisi. Uye 57% yevatengi vane mukana wekutenga kubva kune chavanoteedzera
Tags: 2017 maitiroinfographicmishandirapamwe yemagariromagariro anoteverapasocial media automationpasocial media infographicmagariro enhau mafambirozvemagariro midhiya maitiro 2017kuvapo munharaundakutengesa munharaundazvekutengesa munharaundabukira munzangaMaitiro
8 Dhijitari Dhizaini Maitiro e2017